उम्मेदारलाई बम कसले हान्दैछ ? विप्लवले कि अरूले ? गृहप्रशासन मौन - Everest Dainik - News from Nepal
उम्मेदारलाई बम कसले हान्दैछ ? विप्लवले कि अरूले ? गृहप्रशासन मौन
विप्लव समूह के भन्छ ? हद दर्जाको गैर जिम्मेवारी
काठमाडौं, मंसिर ३ । रोल्पामा वर्षमान पुनको चुनावी टोलीमाथि दिनहुँजसो बम र गोली प्रहार हुन थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका मन्त्रीहरुले नै यस्ता घटना गराएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
भोजपुरमा पूर्वमन्त्री शेरधन राईमाथि बम आक्रमण भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि छानीछानी आक्रमण भएकाले यसमा सत्तापक्षकै हात रहेको हुन सक्ने आरोप लगाए ।
शुक्रबार नुवाकोटमा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतलाई लक्षित गरी शक्तिशाली बम बिस्फोटन भयो । ‘भाग्यवस’ डा. महत चढेको गाडी एम्बुसमा परेन र अर्को गाडी पर्‍यो, जसमा रहेका ५ जना घाइते भए ।
बम विस्फोटनको घटनापछि कांग्रेस नेता डा. महतले यसको दोष निर्वाचन बहिस्कार गरेको विप्लव समूहलाई लगाएनन् । बरु, आफ्नै प्रतिद्वन्दी वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हितबहादुर तामाङ्गले बम विस्फोटन गराएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न जिल्लामा विस्फोटनका घटनाहरु भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा निर्दोष मानिसहरु अनाहकमा बमको शिकार बनेर घाइते भइरहेका छन् । तर, यी घटनामा विप्लव समूहले जिम्मेवारी लिने गरेको छैन ।
र, आक्रमणको शिकार बन्ने नेताले पनि यसमा विप्लव समूहलाई भन्दा आफ्नै विपक्षीलाई औंलो ठड्याउने काम गरिरहेका छन् ।
आखिर बम कसले पड्काइरहेको छ ? कांग्रेसले ? वाम गठबन्धनले ? विप्लव समूहले ? या अरु कसैले ? आम जनमानसमा प्रश्न पैदा भइरहेको छ ।
विप्लव समूह के भन्छ ?
विप्लव समूहका नाममा दिनहुँ भइरहेको बम विस्फोटबारे बुझ्न हामीले सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई फोन गर्‍यौं । तर, उनको फोन स्विच्ड अफ थियो । त्यसपछि हामीले स्वयं विप्लव र अर्का नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई फोन गर्‍यौं, उनीहरुको पनि फोन स्विच्ड अफ थियो ।
ठूला नेताहरु फोन अफ गरेर भूमिगत भएको थाहा पाएपछि हामीले केही मझौला नेतालाई सम्पर्क गर्ने पैयास गर्‍यौं । एकजना केन्द्रीय नेतासँग सम्पर्क भयो, तर उनले आफ्नो नाम ‘कोट’ नगर्ने शर्त तेस्र्याए ।
उनलाई हामीले सोध्यौं- ‘तपाईहरुलाई हेडक्वार्टरबाट के सर्कुलर आएको छ ? सेबोटेज मात्रै गर्ने नीति हो कि नेताहरुको हत्या नै गर्ने नीति हो ?’
जवाफमा उनले भने- ‘हाम्रो नीति यो चुनाव खारेज गर्ने भन्ने छ र यसका लागि तर्साउने भन्ने छ ।’
‘तर, तपाईहरुले बम बिस्फोट गराएपछि वक्तव्य निकालेर जिम्मेवारी किन नलिएको ? कुन घटना तपाइहरुले गरेको हो र कुन चाहिँ अरुले नै गरेको भनेर कसरी छुट्याउने ?’ हामाीले सोध्यौं,- जस्तै नुवाकोटमा डा. रामशरणमाथि कसले आक्रमण गरेको हो ? उहाँले त वाम गठबन्धनमाथि आरोप लगाउनुभएको छ नि ?’
जवाफमा विप्लव माओवादीका ती नेताले भने- ‘हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुलाई व्यापकरुपमा गिरफ्तार गरिएको अवस्था छ, त्यसैले हामीले कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छैन ।’
हामीले फेरि सोध्यौं- ‘जति पनि घटना भएका छन्, ती सबै विप्लव समूहका हुन् भनेर बुझ्दा के हुन्छ ?’
उनले भने- ‘कतिपय घटनाहरु कांग्रेसबाट पनि भएका छन्, कतिपय वाम गठबन्धन र कतिचाँहि राजावादीबाट पनि भइरहेका छन् । धेरैवटा समूह छन् यसमा ।’
हामीले थप प्रश्न राख्यौं- ‘तपाईहरुले घटनाको जिम्मा नलिँदा नगरेका कामको पनि अपजस तपाईहरुलाई नै जाने भयो नि हैन ? कतिपय ठाउँमा निर्दोष र अवोध मानिसहरु पनि घाइते भइरहेका छन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’
विप्लवका ती कार्यकर्ताले भने- ‘हामीले चुनाव खारेज गर्ने भनेकै छौं । अरुले पनि हाम्रो काम गर्छन् भने जस अपजश त हामीले लिनैपर्छ ।’
हद दर्जाको गैर जिम्मेवारी
शुक्रबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवामा विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव घिमिरेले अन्तरवार्ता दिए । सो अन्तरवार्तामा उनले विस्फोटनका घटना आफूले गराएको स्वीकारेनन् । उनले भने- ‘यो हाम्रो पार्टीको भन्दा पनि जनताको आक्रोश हो ।’
तर, यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफबाट विप्लव समूहका नेताहरु उम्किने अवस्था देखिँदैन । किनभने उनीहरुले बम विफोस्टन गराउने नीति लिएको देखिन्छ र यस्ता घटनाबारे मौनता साँध्ने काम गरेका कारण अरु तत्वहरुलाई चलखेल गर्न सजिलो भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतविरुद्ध बिप्लव र चित्रबहादुर केसीकाे साठगाँठ, केपी ओलीको निन्दा
तर, बिस्फोटनका घटनाबारे जिम्मेवारी लिँदाखेरि फौजदारी अभियोगमा समातिने डरले विप्लव समूहका नेताहरु फोन अफ गरेर बस्न थालेका छन् ।
आफ्नो नाममा जसले विस्फोट गरे पनि आफ्नो पार्टीको प्रचार हुन्छ भन्ने हेतुले सो पार्टीका नेताहरु जनताको जिउज्यानको सुरक्षाप्रति हद दर्जाको गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । सो पार्टीले बम बिस्फोटनका घटनाबारे अहिलेसम्म एउटा पनि वक्तव्यसम्म निकालेको अवस्था छैन ।
चुनाव बिथोल्ने उद्देश्य ?
विप्लव समूहले विगतमा राजावादी तत्वसँग पनि साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिलेको घटनाक्रममा निर्वाचनलाई समयमा सम्पन्न हुन नदिने र पछाडि धकेलेर संविधान कार्यान्वयनलाई असर पार्न खोज्ने तत्वहरुका लागि विप्लव समूह गतिलो रक्षाकवच बन्न लागेको देखिन्छ ।
अहिलेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई निर्वाचनमार्फत संस्थागत हुन नदिने अन्तिम कसरतमा पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको र कुनै ठूलो घटना गराएर चुनाव रोक्ने उद्देश्य राखेको त होइन ?
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सञ्चारकर्मीले सोधेका थिए- ‘कुनै उम्मेदवारको हत्या गरेर चुनाव रोक्ने उद्देश्यले पो यस्ता घटना भइरहेका हुन् कि ?’
जवाफमा ओलीले भने- ‘त्यसरी चुनाव रोक्न अव सम्भव छैन । चुनाव पनि रोकिँदैन र कसैमाथि केही हुँदैन पनि ।’
सरकारको कमजोरी र गैरजिम्मेवारी
निर्वाचनका बेलामा जनताको सुरक्षा र अधिकारमाथि विप्लव समूहका नाममा जसरी खेलवाड भइरहेको छ, सरकारले पनि उस्तै गैरजिम्मेवार एवं लापरवाह व्यवहार देखाइरहेको छ ।
जस्तो अहिले गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । चुनाव गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बेलामा गृहमन्त्रीको कुर्सी खाली छ । गृहमन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री आफू र आफ्नी पत्नीको चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् । केन्द्रीय प्रशासनको कमाण्ड कर्मचारीले सम्हालेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीजस्तो मान्छेमाथि नुवाकोटमा त्यस्तो जघन्य हमला हुँदा गृहमन्त्रालयले एउटा सानो वक्तव्यसम्म जारी गरेको छैन । गृहमन्त्रालयले एउटा पत्रकार सम्मेलनसम्म गर्न सकेको छैन । मानिलिउँ देशमा सरकारै छैन, गृहमन्त्रालय नै छैन कि जस्तो अवस्था छ ।
शनिबारमात्रै कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ज्यानमाथि नै धावा बोलेर बम प्रहार भयो । तर, यसबारेमा सरकारले कहीँ कतै औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदैन । कसैले दुःख व्यक्तसम्म गर्दैन ।
एउटा दुले चोर पक्राउ गर्दा गर्वका साथ पत्रकार सम्मलेन गर्ने प्रहरी प्रशासन पूर्वमन्त्रीहरुमाथि बम हान्ने व्यक्तिबारे कुनै सूचना सार्वननिक गर्दैन । उनीहरुको खोजी भइरहेको छ कि, उनीहरुको स्केच कस्तो छ, केही पनि बताइँदैन ।’
याे पनि पढ्नुस विप्लव समुहका धर्मेन्द्र बास्तोलाको घरमा पनि पक्राउ पुर्जी
बम पड्काउने मान्छे बाटोबाट मास्तिर लाग्यो भनेर उसलाई नसमाती पन्छनु भनेको प्रहरीको हदैसम्मको लाचारी हो ।
सरकारको यस्तो मौनताले यी घटनाहरुमा विप्लव समूहको मात्रै हात छ या सरकार संरक्षित ठूलै गिरोहको हात छ भन्ने अन्यौल बढाएको छ । यो अन्यौल चिर्ने दायित्व सरकारकै हो ।
प्रहरीले अहिलेसम्म विप्लव समूहका १७५ जनालाई गिरफ्तार गरेको अनौपचारिकरुपमा जनाए पनि उनीहरु विस्फोटनका घटनामा संलग्न भएकाहरु हुन् या समर्थकहरुलाई मात्रै समातेर झारा टारिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यदि सरकारले यी घटनामा संलग्नहरुमाथि गम्भीरतापूर्व नियन्त्रण गर्न सकेन भने निर्वाचनका बेला कुनै ठूलै अपि्रय घटना नहोला भन्न सकिँदैन ।
लामो गृहयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको मुलुकमा अब बमको धुवाँ उडाउने छुट कसैलाई पनि दिइनुहुँदैन । त्यसैले यसबारे अब सरकारले सघनरुपमा कदम अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले तत्कालै नेत्रविक्रम चन्दलाई समातेर रोध्नुपर्छ, बम तिमीले पड्काएको हो कि हैन ? हो भने उनी र उनको नेतृत्वमाथि कानूनले तोके अनुसारको कारवाही हुनुपर्छ । होइन भने कसले गरेको हो, त्यो पत्ता लगाएर उनीहरुलाई फौजदारी अपराध अन्तगत कारवाही हुनुपर्छ ।
अब कुनै पनि समूहले आफूलाई हातमा गि्रनेट बोकेर आफूलाई ‘राजनीतिक शक्ति हुँ’ भन्छ भने त्यसलाई संविधान, कानून र जनताले स्वीकार्ने स्थितिको तल्काल अन्त्य हुनुपर्छ । राजनीतिलाई पूर्णरुपमा हिंसामुक्त गर्न सरकारले तदरुकता देखाउन आवश्यक छ । याे समाचार अनलाइनखबरबाट लिइएकाे हाे ।
डनलाई चुनावमा टिकट दिने र बमवालालाई चन्दा उठाउन छुट दिने दुबैखाले राजनीतिको अब समापन आवश्यक छ ।